Enweghi ike imeghe ihe nlere anya nke ihe omuma mgbe adighi ozo.
Home ngwaahịa DataNumen Exchange Recovery Enweghi ike imeghe ihe ihe nlere anya nke oma mgbe adighi ozo
Enweghi ike imeghe ihe di iche-iche mgbe anya adighi
I nweghi ike imeghe ihe ufodu folda na-anọghị n'ịntanetị (.ost) faịlụ, mgbe Outlook na-arụ ọrụ na ntanetị.
Njehie a mere mgbe gị OST faịlụ rụrụ arụ ma ọ bụ mebiri emebi.
chọta OST faịlụ na-akpata njehie. Nwere ike ikpebi ọnọdụ faịlụ dabere na ihe onwunwe egosiri na Outlook. I nwekwara ike iji search rụọ ọrụ na Windows iji chọọ maka OST faịlụ.
Idozi njehie ahụ. Gbaa mbọ hụ na ntọala akaụntụ email dị na Outlook bụ eziokwu, na Outlook nwere ike ijikọ na ihe nkesa Exchange gị nke ọma. Mgbe restart Outlook na zipu / nata ozi ịntanetị gị na igbe ozi Exchange Exchange kwekọrọ, nke ga-eme ka Outlook mepụta ọhụụ OST Ọ bụrụ na usoro a anaghị arụ ọrụ, profaịlụ ozi ugbu a ezighi ezi, ị ga-ehichapụ ya ma mepụta nke ọhụrụ, dị ka ndị a: